अभिप्रेरित तर्क डा. सुरेन्द्रसिंह रावल
के तपाईँ गलत हुँदाहुँदै पनि आफूलाई सही ठान्नुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपार्इँ आफ्नो दृष्टिकोण नै सबैथोक हो भन्ने सोच्नुहोला विशेषगरी कसैका बारेमा धारणा बनाउँदा । यस्तो धारणा निर्माणका पछाडि ‘अभिप्रेरित तर्क’ (मोटिभेटेड रिजनिङ्ग) ले काम गरिरहेको हुनसक्छ । यस मूल विषय प्रवेश गर्नुअघि फ्रान्समा घटित उन्नाईसौं शताब्दीको एउटा चर्चित एवम् दारुण घटनाबाट सुरु गरौँ जसमा एक जना निर्दोष सैनिक अधिकारीलाई सैनिक अदालतले देशद्रोही ठहर गरेर सजाय दिएको थियो ।
सन् १८९४ मा फ्रान्सेली सेनाको प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर)मा कार्यरत ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स’ विभागका प्रमुख कर्नेल ज“ स्यान्धरलाई फ्रान्सको नयाँ आर्टिलरी हतियारबारे जर्मनीले गोप्य सूचना पाइरहेको जानकारी प्राप्त भयो । अनि, फ्रान्सेली ‘जनरल स्टाफ’ विभागका एक अधिकृतले कार्यालयको रद्दी टोकरीमा च्यातेर फालेको एक पाना कागज फेला पारे जसलाई जोडजाड पारेर हेर्दा त्यहाँ भित्रैबाट कसैले जर्मनीलाई सैनिक गुप्त सूचना बेचिरहेको पत्ता लाग्यो । छानबिन भयो र उनीहरुको ध्यान त्यहीँ कार्यरत आर्टीलरीका क्याप्टेन अल्फ्रेड ड्राइफसमाथि केन्द्रित भयो ।
त्यहाँ कार्यरत अधिकृतमध्ये ड्राइफसमात्रै यहुदी थिए भने उनको विगतको रेकर्ड राम्रो थियो । उनले आफ्नो सेवाकालमा कुनै गल्ती गरेका थिएनन् । तर, त्यसताका फ्रान्सेली सेना उग्र सामी विरोधी (एन्टाई सिमेटिक) थियो । हस्तलेखनको आधारमा सैनिक टोलीले उक्त काम ड्राइफसले नै गरेको हो भन्ने निक्र्योल गरे । हुन त, बाहिरको पेसेवर हस्तलेखन विशेषज्ञले ड्राइफसको र उक्त पानामा भएको हस्तलेखनमा खासै समानता देखेका थिएनन् । तर, पनि सैनिक टोलीले त्यो मिलेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
दुई सन्तानका बाबु ड्राइफस अध्ययनशील र मेहनती थिए । उनलाई योग्यताको आधारमा सन् १८९२ मा उच्च सैनिक विद्यालयमा तालिमको लागि छनौट गरिएको थियो । तालिममा राम्रो मेहनत गरेका हुनाले उनले अब्बल नतिजा ल्याउँछन भन्ने उनका साथीहरुले सोचेका थिए । तर, तालिम गराउनेमध्ये एकजना जनरल बोनफोन्डको पूर्वाग्रहको कारण उनलाई थोरै नम्बर दिएर ग्रेडिङ्गमा पछि पारियो । उनी नवौं बनाइए । यो अन्याय थाहा पाएर दुई अधिकृतले स्कूलका निर्देशक, जनरल लेवेलिनसामु विरोध पनि प्रकट गरे । तर उनले यसमा आफूले केही गर्न असमर्थ रहेको जनाए । यो विरोधका कारण पनि पछि ड्राइफसप्रति प्रतिशोध लिइएको देखियो । तालिमको नतिजा जे भए पनि, उनको क्षमता र दक्षताका कारण उनलाई तालिमपश्चात् फ्रान्सेली सेनाको ‘जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर’मा नियुक्त गरिएको थियो ।
सूचना बेचेको बारे शङ्का गरेपछि सैनिक अधिकारीहरु ड्राइफसको अपार्टमेन्टमा गएर उनका सबै दराज तथा फाइलहरुको जा“च पडताल गरे तर त्यस्तो सन्देहास्पद केही कुरा भेटेनन् । यसबाट उनीहरुले ड्राइफस देशद्रोहीमात्र होइन निकै चतुर पनि रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकाले । उनले आफ्ना सबै प्रमाणहरु खोजतलास हुनुअघि नै लुकाइसकेको ठानियो । त्यसपछि सेनाले ड्राइफसको सम्पूर्ण विगत खोजीनिती गर्दै जाने क्रममा उनका विद्यालयका शिक्षकहरुसँग बुझ्दा ड्राइफसले विद्यालय जीवनमा विदेशी भाषा सिकेको पाइयो । त्यसबाट ड्राइफसले भविष्यमा विदेशी सरकारसँग षड्यन्त्रपूर्ण साँठगाँठ गर्ने सोच बनाएको निष्कर्ष निकालियो ।
उनका शिक्षकले ड्राइफसको स्मरणशक्ति राम्रो भएको पनि बताए । त्यसले उनीहरुको शंकालाई अझ मजबुत बनायो । किनभने, तीक्ष्ण बुद्धि जासुसीका लागि आवश्यक गुण मानिन्थ्यो । त्यसपछि ड्राइफसलाई बन्द सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइयो र उनलाई दोषी ठहर गरियो । उनलाई सजायस्वरुप त्यतिबेलाको सैनिक चलनअनुसार सार्वजनिक स्थानमा लगेर सैनिक र गैरसैनिक भीडका बीच अपमानपूर्वक उनको फुली खोसियो, चिन्दल (इन्सिग्निया) निकालियो र खड्ग भाँचियो । ड्राइफसले रुँदै भने – “म कसम खान्छु कि म निर्दोष छु । म सेनामा सेवा गर्न योग्य छु । फ्रान्स जिन्दावाद ! सेना जिन्दावाद !” तर, उनको एक्लो पुकार कसैले सुनेनन् । त्यसपछि उनलाई जन्मकैद गरियो । उनले कैद भित्रैबाट सरकारलाई धेरै याचना गरे तर त्यसको सुनुवाइ भएन ।
यस्तो हुनुमा अभिप्रेरित तर्क (मोटिभेटेड रिजनिङ्ग) कारण रहेको लेखिका जुलिया गालेफले आफ्नो ‘टेड टक’ मा बताएकिछन् । गालेफले ‘तपार्इँ किन आफूलाई सही ठान्नुहुन्छ, भलै तपाई गलत हुनुहुन्छ’ (ह्वाई डु यु थिङ्क यु आर राइट, इभन इफ यु आर रङ्ग) शीर्षकको प्रवचनमा ‘सैनिक मानसिकता’ र ‘स्काउट मानसिकता’ को विश्लेषण गर्दै कसरी ती दुई भिन्नाभिन्नै प्रवृत्तिले प्राप्त सूचनालाई भिन्नाभिन्नै ढङ्गले प्रशोधन गर्छन् भनी बताएकी छन् । उनले आफ्नो खोजको व्याख्या गर्न माथिउल्लिखित ‘ड्राइफसको मानमर्दन’ (डिग्रेडेसन अफ ड्राइफस) का रुपमा चर्चित घटनाको विश्लेषण गरेकी छन् । उनी भन्छिन् – सैनिकहरु अभिप्रेरित–तर्कका कारण आफ्नो दृष्टिकोण कुनै पनि मूल्यमा प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । तर, स्काउटहरु भने जिज्ञासाबाट उत्प्रेरित हुन्छन् ।
अभिप्रेरित तर्क भनेको आफूमा विद्यमान भित्री इच्छा र डरले सूचनालाई अथ्र्याउने अवचेतन तर्क हो । यस्तो तर्क दिँदा केही जानकारी वा कुरा मित्रवत् लाग्छन् र त्यसको प्रतिरक्षा गरिन्छ भने केही शत्रुवत् अनुभूत हुन्छन् । त्यसैले त्यसमाथि आक्रमण गरिन्छ । सैनिकहरु आफ्नो र आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्न तथा दुस्मनलाई हराउन मनभित्र गढेर बसेको स्वचालित प्रणालीको अनायास परिचालन गर्छन् । स्काउटहरु भने त्यहाँ जमिनमा के छ भन्ने कुरा जतिसक्दो सही एवम् यथार्थरुपमा जान्न कोसिस गर्छन् । किनभने, उनीहरुको काम हमला गर्ने वा प्रतिरक्षा गर्ने होइन, तथ्य बुझ्ने हो । सेनामा यी दुवै प्रवृत्तिका मानिसको आवश्यकता हुन्छ तर त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यी दुई प्रवृत्तिलाई यहाँ मानसिकताका रुपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । सही फैसला र उचित निर्णय गर्ने कुरा व्यक्तिको मानसिकतामा भर पर्छ ।
अभिप्रेरित तर्क सेनामा अत्यधिक देखिने भएकाले उनी त्यसलाई ‘सैनिक मानसिकता’ भन्छिन् । तर, यो मानसिकता सेनामा मात्र हुन्छ भन्ने छैन । यस्तो सोचले राजनीति, खेलकुद, अध्ययन अनुसन्धान, प्राज्ञिक आदि अरू क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ । खेलमा रेफरीले आफ्नो टिमलाई झेल गरेको ठहर गर्छ अनि उसले रेफरी किन गलत छ भनी अनेकौं तर्क खोज्न थाल्छ । तर, त्यही रेफरीले अर्को टीमलाई झेल गरेको ठहर गर्दा भने ऊ रेफरीले सही गर्यो भनी दङ्ग पर्छ । उही रेफरीको बारेमा यस्तो प्रवृत्ति दुवै टिममा देखिन्छ । राजनीतिमा आफ्नो विचार मिल्नेका गतिविधि समाजले पचाउन गाह्रो भए पनि ठीक लाग्ने तर विचार नमिल्ने समूहका गतिविधि जनताले स्वीकारे पनि गलत लाग्ने हुन्छ । त्यस्तै, बौद्धिक क्षेत्रमा कुनै अध्ययन प्रतिवेदनलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले हेर्नुभन्दा आफूले सोचेजस्तो निष्कर्ष आयो भने त्यसको समर्थन र आफ्नो सोचविपरित भयो भने त्यसको खण्डन गर्ने पनि यही मानसिकताले गर्दा हो । ‘सैनिक मानसिकता’ को सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको यस्तो मानसिकता हुनेले आफूले स्वच्छ, नैतिक र निष्पक्ष मनले काम गरेको छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ तर उसको अवचेतन मनभित्रको अभिप्रेरित तर्कले गर्दा कुनै निर्दोष मानिसको जीवन बर्बाद गरिरहेको हुन्छ ।
सन् १८९६ मा फ्रेन्च सैनिक हेडक्वार्टरको इन्टेलीजेन्स विभागका आएका नयाँ प्रमुख कर्नेल जर्ज पिकार्ट पनि ड्राइफस दोषी थिए भन्ने मान्यता राख्थे । तर, उनले केही समयपछि ‘हामी सबै ड्राइफसको बारेमा गलत भयौँ भने के होला’ भनी शङ्का गर्न थाले । उनको सन्देहको कारण ड्राइफसको स्वच्छ चरित्र तथा उनलाई कैद गरेपछि पनि जर्मनीलाई सूचना चुहाउने काम नरोकिनु थियो । त्यतिमात्र होइन, फ्रेन्च सेनामा भएका अर्का अधिकृतको हस्तलेखन पनि रद्दीको टोकरीमा फालिएको पानासँग मिल्दोजुल्दो पाइयो । पिकार्टले प्रमाणसहित आफ्नो हाकिमलाई उक्त घटनाको वास्तविक दोषी मेजर फर्डिनान्ड भएको रिपोर्ट गरे । तर, उनलाई त्यहाँबाट सरुवा गरी चुप रहन लगाइयो ।
ड्राइफस निर्दोष भएको बारे संचार माध्यम र उनका समर्थकहरुले विरोध गरेपछि पुनः १८९९ मा सैनिक अदालत बस्यो तर उक्त अदालतले सबै प्रमाण ड्राइफसको पक्षमा हुँदाहुँदै उनलाई नै दोषी ठहर गर्यो । उक्त नयाँ प्रमाण हुँदाहुँदै फैसलामा ड्राइफसको हस्तलेखनको नक्कल गरी अरु कसैले जर्मनीलाई सूचना बेचिरहेको भए पनि ड्राइफस दोषी नै रहेको तर्क गरियो । तर, पछि जनदबाब बढ्दैजाँदा सेनाको गल्ती ढाकछोप गर्न ड्राइफसलाई राष्ट्रपतिबाट क्षमादान दिलाइयो । मुक्तिपछि ड्राइफसले भने – “गणतान्त्रिक सरकारले मेरो स्वतन्त्रता फिर्ता दिएको छ । तर, मेरो गरिमाविना यो मुक्ति मेरा लागि केही पनि होइन ।” अन्ततोगत्वा, ड्राइफसलाई १२ जुलाई १९०६ मा आधिकासरिकरुपमा सबै आरोपहरुबाट सफाइ दिइयो । सफाइ दिइएको भोलिपल्ट पदोन्नति गरी उनलाई सैनिक सेवामा पुनः प्रवेश गराइयो । एक सातापछि उनलाई ‘लेजियोन अफ अनर’ को ‘नाइट’ बनाइयो र त्यसपछि उनले सेनामा विभिन्न युनिटहरु कमान्ड गरे ।
अनेक कोसिस गर्दा पनि दस वर्षको प्रयासपछि मात्र पिकार्टले ड्राइफसलाई दोषमुक्त गर्न सके । वास्तवमा पिकार्ट पनि अरु फ्रान्सेली सैनिक अधिकारी सरहकै परिवेशमा हुर्केका र सामी विरोधी (एन्टाई सिमेटिक) थिए तर उनको सोच भने ‘सैनिक मानसिकता’ नभई ‘स्काउट मानसिकता’ को थियो । यो मानसिकता भएका व्यक्तिमा जित्ने वा हार्ने कुरामा जोड दिनुभन्दा पनि इमानदार र सहीरुपमा वास्तविकता के हो भन्ने जान्ने उत्सुकता हुन्छ भलै, त्यो तथ्य उसलाई अप्रिय वा असुविधाजनक नै किन नहोस् । ‘स्काउट मानसिकता’ पनि ‘सैनिक मानसिकता’ जस्तै भावावेश तथा भावना (इमोसन)मा आधारित हुन्छ । तर, त्यो जान्ने र रहस्य सुल्झाउने उत्सुकताको भावना हो । दार्शनिक बट्रेन्ड रस्सलले आफ्नो पुस्तक ‘एन आउटलाइन अफ फिलोसफी’मा भनेका छन् – “जब हामी जगतलाई बुझ्न खोज्छौ ‘इमोसन’ ले बाधा उत्पन्न गराउने देखिन्छ । त्यसले तर्कहीन विचार उत्पन्न गर्छ ।”
गालेफका अनुसार ‘स्काउट मानसिकता’ सद्गुणी चरित्रको उपज हो । यस्ता मानसिकता हुनेहरु उदार मनका हुन्छन् र तथ्य पत्ता लगाउने क्रममा आफ्नो पूर्वठम्याइलाई परिवर्तन गर्नु कमजोरी ठान्दैनन् । उनीहरु यथार्थवादी हुन्छन् र आफ्नो सोचभन्दा पृथक तथ्यपरक विचारलाई पनि सहजै स्वीकार गर्छन् । वास्तविकता पत्ता लगाउन आफ्नो गल्ती स्वीकार्न हिच्किचाउँदैनन् । यी दुवै मानसिकता कुनै व्यक्ति कति बुद्धिमान छ वा कति होसियार छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने होइन । यी मानसिकता भनेका कुनै व्यक्तिले कस्तो सोच्छ र अनुभूति गर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ । उनी अगाडि भन्छिन् – हामीले आफूले गरेको कुनै कुरा गलत भयो वा हुनलागेको थाहा पायौँ भने लघुताभास गर्नेभन्दा तथ्य पत्ता लागेकोमा गर्व गर्न सिक्नुपर्छ । आफ्नो धारणाभन्दा फरक सूचना आएमा प्रतिरक्षा गर्नेभन्दा किन त्यसो भयो भनी चासो दिन सिक्नुपर्छ । मूल प्रश्न भनेको हामी आफ्नै मनको विश्वासलाई प्रतिरक्षा गर्न उद्यत हुन्छौँ वा जगतलाई सम्भव भएसम्म स्पष्टरुपमा हेर्न र बुझ्न चाहन्छौँ भन्ने हो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ नेपालमा ड्राइफसको घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । तर, के नेपालमा कर्नेल पिकार्टजस्ता स्काउट मानसिकता भएका अधिकारी छन् जो आफूले सोचेको कुरा नै सही हुनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि तथ्य के हो भन्ने पत्ता लगाउन जिज्ञासु र तत्पर रहन्छन्? छन् भने ती पिकार्ट सत्यतथ्य उधिन्न कहिले सफल होलान् ?